लथालिंग कांग्रेस, भताभुंग भ्रातृसंस्था « Pahilo News
प्रकाशित मिति :2July, 2019 8:19 am
काठमाडौं, १७ असार । कांग्रेस विधानमा सबै पालिकामा समिति बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म बनाएको छैन । देश संघीयतामा जानुअघि देशभरका करिब चार हजार गाविस र नगरपालिकामा कांग्रेसका समिति थिए । नयाँ समिति नबनेकाले पुरानै समितिका सभापतिले अहिले पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
संसारभर छरिएका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गत ६ देखि ८ असारसम्म डेनमार्कको कोपनहेगनमा विश्व भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्‍यो । ३३ देशमा कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति छ, तर १२ देशका मात्रै अध्यक्ष उपस्थित भएका थिए । उनीहरूसाथ केही सहयोगी पनि थिए । कांग्रेसले भने २४ देशस्थित जनसम्पर्क समितिका २०५ कार्यकर्ता सहभागी भएको दाबी गरेको छ । तर, तस्बिरले भने ५० कार्यकर्ता पनि देखाउँदैन । काठमाडौंबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, डा रामशरण महत, डा मीनेन्द्र रिजालसहित २२ नेता प्रशिक्षण दिन पुगेका थिए । परिवारसहित प्रतिनिधिमण्डल २९ जनाको थियो ।
भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नभएको मात्र होइन, पार्टीका संरचनासमेत बन्न सकेका छैनन् । पार्टीलाई कहिलेसम्म यस्तो भद्रगोल बनाउने ? पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त नबनाउँदा हामी कमजोर देखिएका छौँ । सभापतिसँग अब यो विषयमा कुरा हुन्छ । पार्टीलाई भद्रगोल बनाएर उहाँले के गर्न खोज्नुभएको हो ? अब बस्ने केन्द्रीय समितिमा कुरा उठाउँछौँ ।
पदाधिकारी र २१ मध्ये २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न साढे दुई वर्ष लगाएका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक केन्द्रीय सदस्य अझै मनोनीत गरेका छैनन् । दलित कोटाबाट एक केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएपछि मात्रै विधानको पुरानो व्यवस्थाअनुसारको कार्यसमिति पूरा हुन्छ ।